Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Baadhitaanka xiisaha leh ee garoonka diyaaradaha Frankfurt
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xarunta Soo-booqdaha ee Fraport-ka cusub ayaa la furayaa Ogosto 2, Dalxiisyada booqdaha Terrace iyo Madaarka ayaa hadda dib u hawl gala.
New multimedia Center Visitor Center oo dhowaan ka furmi doona Concourse C ee Terminal 1.
Safarada caanka ah ee garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale dib u bilaaban doona horaanta bisha Ogosto.
“Daaqadaha casriga ah” waxay adeegsadaan xaqiiqda daldalaalka ah si loogu kabo masraxa looxaanta macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee diyaaradaha la dhigto.
Madaarka Frankfurt ayaa helaya soo jiidasho kale: xarun warbaahineed oo fara badan oo dhowaan ka furmi doonta Concou C ee Terminalka 1. Xarunta cusub ayaa dhigeysa adduunka xiisaha leh ee garoonka diyaaradaha ugu weyn Jarmalka farahooda. Waxay fursad u tahay taageerayaasha garoonka diyaaradaha da ’walba inay ku sahmiyaan meheradda duulimaadka dhammaan dareenkooda. Ka waran ku siibashada doorka marshaller oo aad diyaarad ugu hagto booska ay dhigato? Waxaad ku samayn kartaa halkan! Mise xanuun ayaa ku soo dhacaya godadka dhaadheer ee nidaamka xamuulka qaada ee garoonka diyaaradaha? Kaliya gasho samaacadaha dhabta ah ee dhabta ah oo bilaw dhaqdhaqaaqa xiisaha leh! Xarunta dhexe ee bandhiga, The Globe, ayaa sidoo kale kuu oggolaaneysa inaad si ciyaaro leh u aragto duulimaadyada adduunka oo dhan ficil ahaan - oo aad wax ka barato doorka muhiimka ah ee garoonka diyaaradaha Frankfurt uu ku ciyaaro.
Wadada loo marayo carwada fidisa 1,200 mitir murabac ah waxaa lagu muujiyey xariijimo dhalaalaya oo dusha sare ka dhalaalaya kuwaas oo si sax ah ugu habboon waddooyinka ay adeegsadaan diyaaradaha waaweyn si ay u kacaan una dagaan. Xilliga bilawga, qaab-mitir 55-mitir oo laba jibaaran oo ka socda Magaalada Madaarka (oo qiyaastiisu tahay 1: 750) ayaa ku martiqaadaya martida inay bilaabaan socdaal dalxiis oo daah fur ah. Nuqulkan faahfaahsan ee gegeda diyaaradaha oo dhan iyo dhismayaasha 400-ee qariibka ah ayaa si is-dhexgal ah loogu baari karaa iyadoo la adeegsanayo iPad. In ka badan 80 dhibco dhijitaal ah oo xiiso leh ayaa keena macluumaad fara badan oo xiiso leh qaab qoraallo, fiidiyowyo iyo animations 3D ah. “Daaqadaha casriga ah” waxay adeegsadaan xaqiiqda daldalaalka ah si ay ugu darsadaan dabaqyada 'panorama' xogta waqtiga-dhabta ah ee diyaaradaha la dhigto. Sheekooyinka xiisaha leh ee ku saabsan zeppelins iyo Berlin Airlift sidoo kale waa lagu raaxeysan karaa inta lagu jiro safarka dib ugu noqoshada waqtiga.
"Globe", oo ah gidaar weyn oo is-dhexgal ah oo ka kooban 28 shaashadood oo kormeerayaal ah, ayaa ku wada sawiraya dhammaan duulimaadyada socda ee u dhexeeya FRA iyo dhibcaha kale ee adduunka oo dhan waqtiga dhabta ah. Waa hab cajiib ah oo lagu soo maro websaydhka weyn ee isku xidhka caalamiga ah iyo kakanaanta duulimaadyada caalamiga ah.
Safarada caanka ah ee garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale dib u bilaaban doona horaanta bisha Ogosto. Safarka Bilowga wuxuu socdaa 45 daqiiqo oo ay kujirto sheeko toos ah si loo bixiyo qulqulo xiiso leh oo ah tirooyin, xog iyo xaqiiqooyin ku saabsan garoonka diyaaradaha iyo howlihiisa. 120-daqiiqo ee XXL Tour wuxuu bixiyaa muuqaal aad u ballaadhan oo daaha gadaashiisa ah. Martidu waxay daawan doonaan howlaha dhulka, duulimaadyada iyo soo degaya inta ay diyaaradda ag marayaan, sidoo kale waxay soo qabanayaan astaamaha xarunta dabka ee lambarka 1 iyo mashruuca dhismaha Terminal-ka cusub ee 3 ee koonfurta garoonka diyaaradaha.
Habka ugufiican ee loogu soo wareejiyo dalxiis garoonka diyaaradaha waa inaad ku raaxeysatid aragtida ka timid booqdayaasha caanka ah ee Terrace. Mashruucan Terminal 2 wuxuu bixiyaa aragtida shimbiraha-indhaha ee diyaaradaha ka kala socda adduunka oo dhan markay soo degayaan iyo kuwa kacaya iyo dhaqdhaqaaqa ka socda gegida diyaaradaha. Si loogu dabbaaldego dib u furitaankeeda, gelitaanku waa lacag la'aan waqti xaddidan - si loo koobo tirada dadka soo booqanaya waqti kasta, si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in waqti loo haysto.
Boos celin ayaa looga baahan yahay dhamaan tas-hiilaadka waxaana lagu sameyn karaa dukaanka tigidhada www.fra-tours.com. Nasiib darrose, weli suurtagal maahan in sidaas lagu sameeyo goobta. Inta lagu jiro fasaxyada iskuulka xagaaga ee gobolka Jarmalka Hesse, martida Xarunta Booqdaha waxay si bilaash ah u dhigan karaan xarumaha gawaarida la dhigto ee FRA: si fudud u qaado tigidh marka aad gaariga wado iyo inaad ku ansaxiso irida Xarunta martida. Sidoo kale dadka maalinlaha ah, garoonka diyaaradaha Frankfurt marwalba waa goob qiimo leh - si dabiici ah iyadoo loo hogaansamayo sharciyada hada jira ee looga hortagayo infekshinka.
Muhiim u ah in la ogaado: sida Terrace 'Visitors', Multimedia Fraport Visitor Center ayaa sidoo kale loo dalban karaa qabashada dhacdooyinka nuucyadooda kala duwan.